Na-eji nyocha nyocha mmekọrịta ọha maka amụma ahịa ahịa amụma | Martech Zone
Anyị emeela ọtụtụ nyocha na ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ ndị mepụtara nnukwu ụlọ nkwakọba ihe nke data bara oke uru. Ọtụtụ mgbe, a na-ama ụlọ ọrụ ndị a aka ka ha nwekwuo mmetụta nke ahịa ha, na-eto eto ahịa ha, ma na-eme ya dabere na ngwaahịa na onyinye ha. Mgbe anyị gwuru ntakịrị n'ime nyiwe ha, agbanyeghị, anyị ga-ahụ na ha achịkọtala data nke data ejibeghi.
Lee ụfọdụ ihe atụ n'ime ụlọ ọrụ ịre ahịa Email:
Kedu ihe kpatara na ụlọ ọrụ na - azụ ahịa email anaghị enwe ike ị nye ọkwa njigide, pịa, mepee ma gbanwee data maka ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa iji chọpụta ọganiihu ha? M ga-enwe ike mfe ịhụ otú m ndepụta nnweta na njide mgbalị iji tụnyere yiri ụlọ ọrụ na yiri firmagraphics iji hụ ma m na-eme nke ọma ma ọ bụ.
Gini mere na ụlọ ọrụ ịre ahịa email anaghị enwe ike ịnye nyocha amụma nke na - ebu amụma gbasara ire ahịa dabere na uto na ogo ndị debanyere aha na listi email gị? You marala uru ndị debanyere aha gị dabere na ikike ha, ọrụ ha, ọdịdị ala ha, na ọnụ ọgụgụ mmadụ?
Kedu ihe kpatara na ụlọ ọrụ email anaghị enwe ike iwulite ụlọ ọrụ email na-akpaghị aka melite adreesị email na akaụntụ, ma ọ bụ wepu ha mgbe ha bilitere n'otu akaụntụ? Kedu ihe kpatara na ụlọ ọrụ na-ere ahịa email anaghị ajụ ha ma ha ga-achọ imelite ozi ha n'ofe ndị ahịa niile ekesara n'otu ikpo okwu?
Ọ bụrụ n ’ịmalite igwu n’ime data ahụ, ị ​​ga - ahụ ozugbo otu ịtụnanya na ọ ga - enwe usoro na data maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Cheedị mkpebi ị nwere ike ime dabere na ịnweta ọgụgụ isi gafere ndị ahịa niile kama ịnwepụta ndepụta nke aka gị?
Lee ụfọdụ ihe atụ n'ime ụlọ ọrụ Social Media:
Kedu ihe kpatara na ikpo okwu dị ka Twitter anaghị ewunye ọgụgụ isi? N'agbanyeghi nkenke ọ bụla ma ọ bụ onye na-akwalite njikọ, Twitter nwere ike ịnye data nzuzu nke ga-enye akụkọ zuru oke na azụmaahịa banyere mmetụta nke ọdịnaya ha, nkwalite, na mmemme nkwado. Cheedị na ị nwere ike ịhụ osisi data dị egwu nke na-enye njikọ nke njikọ - site n'ọgbọ, na ịkekọrịta, iru, na ịpị… gafee onye ọrụ Twitter ọ bụla nke kesara ma ọ bụ degharịa ya?! Ekwuru m nke a na azụmahịa n'izu gara aga ma ha kwuru na ha ga-akwụ ụgwọ maka ịnweta data a. Kama, Twitter anaghị enye ihe ọ bụla ma a manyere anyị ịdabere na data gbara ọchịchịrị ma jikọọ ndị na-eme mkpụmkpụ iji nwalee ịlaghachi mmetụta ahụ.
Nke a bụ ezigbo ihe ịtụnanya dị na Foursquare. Mgbe Chipotle nwere nsogbu na nchekwa nri, Ou nwere akụkụ anọ nwere ike inyocha ọmarịcha okporo ụzọ na-agafe ụlọ ahịa na n'ikpeazụ, ịkọ ọnwụ:
Nsonazụ ahụ? Chipotle ekwuputala ọkwa ego nke mbụ ya na amụma Foursquare dị na ebumnuche - ya na 30% daa na ahịa. Foursquare abụghị naanị ike ịkọ ọnwụ, ha nwekwara ike ịkọ amụma siri ike karị:
Anyị kwenyere na ịrị elu 23% n'otu ụzọ ahịa ụlọ ahịa bụ ọnụ ọgụgụ bara uru karịa nke ndị na-eketa oke kwesịrị ilekwasị anya, karịa 30% ojuju na ahịa. Ọ na-egosi na Chipotle na-ewulite ntụkwasị obi na ndị ahịa, nke dị mkpa maka ọganiihu ya ogologo oge. Jeff Glueck, onye isi Foursquare.
Aga m agba gị ume ka ị gụọ Ozi Mr. Glueck dum, ọ na-adọrọ mmasị!
Atụmatụ na ọgụgụ isi
Mụ na otu ụlọ ọrụ rụkọtara ihe karịrị 1 ijeri factoids na nnukwu ụlọ nkwakọba ihe data, mana ha lekwasịrị anya na uto nke mmefu ego nke mgbasa ozi ha karịa ogo na uru nke data ha na-agbakọ. Anyị mere ka ha sie ike ihichapụ data ahụ ma were onye sayensị sayensị data. Ha emeghi ma nweela kemgbe tered jiri ugwu nke ihe omuma a na-achotaghi nke bara oke uru ma oburu na enwetara ya nke oma.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinyekwu ngwaahịa ma tinyekwuo oge na atụmatụ ha. Atụmatụ ndị dị jụụ, mana enwere ike i beomi ha n'ụzọ dị mfe. Ọgụgụ isi iji nyere ndị na-azụ ahịa aka mmeri na asọmpi azụmaahịa bara uru karịa koodu ọ bụla.
Data bụ ihe onwunwe dị egwu nke na-ekwesịghị ịmatakwu ihe abụọ:
Njikwa - Ngwuputa data gi ma nye nyocha nyocha nke ulo oru gi.
uru - enyere nhọrọ nke atụmatụ nke na-eme ka ndụ ndị ọrụ were dị mfe ma ọ bụ data na-enyere onye isi aka ime mkpebi ka mma, aga m ahọrọ data oge ọ bụla.
Kedu ụdị ọla edo ị na-anọdụ ala?
Tags: nnukwu dataChipotleụkwụ ụkwụakụkụ anọnchịkọta amụmaelekọta mmadụ media